မြရွက်ဝေ: February 2008
ကိန်းဂဏန်းများ(၅)မှာ ရေးခဲ့တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် "ခုဂဏန်း၂လုံးက တူပြီး ဆယ်ဂဏန်း၂လုံးပေါင်းခြင်း ၁၀ ရတဲ့ ကိန်းနှစ်လုံးမြှောက်ခြင်း"အကြောင်းပါ။
ခုဂဏန်း၂လုံးက တူပြီး ဆယ်ဂဏန်း၂လုံးပေါင်းခြင်း ၁၀ ရတဲ့ ကိန်းနှစ်လုံး
ဥပမာ [ 29 x 89 ] ,[ 47 x 67 ] ,[ 58 x 58 ]
စတာတွေကို မြှောက်ရင် အဓိကအချက်က
***(၁) [ ဆယ်ဂဏန်း ] x [ ဆယ်ဂဏန်း ] + [ ခုဂဏန်း ] ရလာဒ်ကို ယူရန်နဲ့
e.g, [ 29 x 89 ] = ?
မှာဆိုရင်2x 8 +9= 25 (စိတ်ထဲမှာ "2 5_ _ "လို့မှတ်ပေးထားပါ။)
***(၂) ခုဂဏန်းနှစ်ခုကို မြှောက်ရန်နဲ့ ရလာဒ်ကို (၁)အဖြေအနောက်မှာ ရေးရန်ပါ။
ရတဲ့ 81 ကို "2 5_ _ "နောက်မှာရေးပါ။
(ရှေ့သင်ခန်းစာနဲ့ အဓိက ကွာခြားသွားတာ တစ်အချက်မှာပါ။)
[ 47 x 67 ] = ?
[ ဆယ်ဂဏန်း ] x [ ဆယ်ဂဏန်း ] + [ ခုဂဏန်း ]4x6+7= 31
ခုဂဏန်းနှစ်ခုကို မြှောက်ရန်7x7= 49
[ 58 x 58 ] = ?
[ ဆယ်ဂဏန်း ] x [ ဆယ်ဂဏန်း ] + [ ခုဂဏန်း ]5x5+ 8 = 33
ခုဂဏန်းနှစ်ခုကို မြှောက်ရန် 8 x 8 = 64
ဘာကြောင့် ဒီလိုတွက်ရတာလဲဆိုရင်_ ကိန်း၂လုံးစီကို (10a+c) ရယ် (10b+c) အနေနဲ့ထားပြီး ရှင်းပြပါမယ်။ နောက်သိထားရမယ့်အချက်က ခုဂဏန်းဘက်ကို ညွန်းတဲ့ aနဲ့b က (a+b=10) ဆိုတာကိုပါ။
(10a+c) x (10b+c)
=100ab + 10bc +10ac + cc
=100ab + 10c(a+b) + cc
=100ab + 10c x 10 + cc
=100ab + 100c + cc
=100(ab+c) + cc
(ab+c)က [ ဆယ်ဂဏန်း ] x [ ဆယ်ဂဏန်း ] + [ ခုဂဏန်း ] ဖြစ်ပြီး 100နဲ့မြှောက်ထားတဲ့အတွက် သူ့အနောက်မှာ ကိန်းနှစ်လုံးရှိတာကို ပြပါတယ်။ cc က ခုဂဏန်းနှစ်ခုကို မြှောက်ခြင်းကို ပြပါတယ်။
[ 29 x 89 ] ကို အဲဒီပုံစံနဲ့ ရှင်းပြရရင်_
=(10x2+9) x (10x8+9)
=100(2x8+9) + 9x9
36 x 76 = ?
14 x 94 = ?
83 x 23 = ?
65 x 45 = ?
Posted by မြရွက်ဝေ at 2:25 PM5comments
Labels: အင်ဒို သင်္ချာ
သွားတုန်းက ကာမာကူရာကိုပါ။ မသွားခင် ဂူဂယ်မှာရှာကြည့်တော့ အဲဒီနားမှာ ဘုရားကျောင်းတွေ အများကြီးဘဲ။ အဆင်ပြေရင်ဝင်မယ်လို့ စိတ်ကူးသွားတယ်။ "ဟစဲဘုရားကျောင်းက" ဘူတာကနေ ကာမာကူရာဆင်းတုတော်ဆီ လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ လမ်းမှာရှိတာကြောင့် ဘယ်လိုသွားသွား ကြုံနေတယ်။ အခုအချိန်က အေးလဲအေး၊ မြို့သေးသေးလေးနားမှာရှိတာကြောင့် လူမစည်လောက်ဘူးထင်တာ ဘူတာမှာကတည်းက လူတွေများသား၊ ဂျပန်တွေရော နိုင်ငံခြားသားတွေရောဘဲ။ ပလက်ဖောင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကို တန်းစီသွားနေကြတာ ဘုရားဈေးလျှောက်တာကျနေတာဘဲ။ လမ်းဘေးတလျှောက်လည်း ဆိုင်းတန်းတွေနဲ့။ တချို့ဆို ကျိုက်ထီးရိုးက ဆိုင်လေးတွေလိုဘဲ ရွှေချည်ထိုးလေးတွေ၊ ချည်ထည်နဲ့ တိုလီမိုလီလေးတွေရောင်းတယ်။ တချို့ကျတော့ စပန့်ဂါဝန်တွေချိတ်ထားတာ ချောင်းသာကဆိုင်နဲ့တောင်တူတယ်။ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တာ ဘုရားကျောင်းတောင်ရောက်ရော။
ဘုရားကျောင်းအဝက "ဂျင်းရိကိရှ (လန်ချား)"
"အိုမီကုဂျိ"ဆိုတဲ့ ဗေဒင်စာရွက်တွေ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း စပ်စုနေတယ်။
ဂူထဲမှာ မတ်ရပ်ရုပ်ပွါးတော်တွေရှိတယ်။ (ဂျပန်လိုတော့"ခမိစမ") အမည်တွေကတော့ အစုံဘဲ။ ဂျပန်တွေက ဘုရားရယ်လို့ ယူဆပုံမရဘူး။ နတ်လို သဘောထားပုံဘဲ။ ဘာလို့လဲဆို ရုပ်ပွါးတော် အမည်တွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်မိလို့။ မှတ်မိတဲ့ အမည်တချို့မှာ "ပညာရေးနတ်" (ရုပ်ပွါးတော်ပုံပေမယ့် နတ်လို့ဘဲ သုံးပါရစေ)၊ "အချစ်ရေးနတ်"၊ "ကျန်းမာရေးနတ်" စတာတွေအပြင် "အရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်"ပါ တွေ့ရတယ်။ ဘုရားပုံတော်ထုပြီး အဲလိုအမည်တွေ တွေ့ရတာ တမျိုးကြီးဘဲ။ ဂူဝင်ဝင်ချင်းမှာ အလှုခံပုံးနဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေ ထားထားတဲ့ နေရာ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဖယောင်းတိုင်ယူပြီး တချို့က သူတို့သဘောကျတဲ့ ရုပ်ပွါးတော်အမည်ရှေ့မှာ ပူဇော်ကြတယ်။
ဒါက "ပညာရေးနတ်" ရှေ့မှာ မီးပူဇော်ထားတာ။ (အမည်ပါအောင်ရိုက်လိုက်လို့ ရုပ်ပွါးတော်က တဝက်ဘဲပါတော့တယ်။)
သူတို့လဲ အကြွေတွေပစ်ပြီးဆုတောင်းကြတယ်။ အကြွေစေ့တွေ ကန်ထဲမှာ အများကြီး။
ရွှေရောင်သေးသေးလေးတွေမို့ ဘုရားဆင်းတုတွေများလားလို့ အနီးကပ်သွားကြည့်မိတော့ ဗျပ်စောင်းတီးနေတဲ့မယ်တော်ပုံလေးတွေ။
ဂူအထွက်ဝမှာ အဲဒီမယ်တော်ပုံနဲ့ ဆုတောင်းစာချိတ်ဖို့ စာရွက်တွေနဲ့ အလှူခံပုံး။
"နဂေါ့မိဂျိဇိုး"တဲ့။ ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်အောင် စောင့်ရှောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကလေးတွေကတော့ ကန်ထဲက ငါးရောင်စုံတွေ အစာကျွေးရင်း ပျော်နေကြတယ်။
ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ဘယ်သူမှ ဝင်မရှိခိုးကြပါဘူး။ အဝမှာဘဲ ရပ်ကြည့်ကြတယ်။
တောင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ပင်လယ်ရှုခင်း
ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကို လမ်းလျှောက်ကြည့်ချင်သား။ ဆောင်းတွင်းဖြစ်တော့ ညနေစောင်းလာတာနဲ့ အေးလဲပိုအေး မှောင်လဲမှောင်မြန်တယ်လေ။ တောင်ပေါ်ရှုခင်းကဘဲ ပင်လယ်ကိုငေးပြီး ကာမာကူရာဘက်ကို ခရီးဆက်ခဲ့တော့တယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 10:36 PM5comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 6:00 PM 12 comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 11:12 PM 8 comments
♥´¨`♥ .¸¸.♥´¨`♥.¸¸.♥　お誕生日おめでとう　♥´¨`♥ .¸¸.♥´¨`♥.¸¸.♥
いつも　優しいので　ありがとう。
いつも　弱いあたし　を　支えてあげたので　ありがとう。
まずい料理をしても　いつも　美味しいと言って食べたので　ありがとう。
いろいろな事のため　ありがとう。いつも　いつも　ありがとう。
ありがとうほか　言いたいことがあるけど　分かると思ったので　この言葉　心の中に　置きますよ。
二人で　一生、永遠に　幸せに　過ごしたいね。。。。
ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ ကိတ်မုန့် မလှပေမယ့် စေတနာတွေ အပြည့်ပါတယ်နော်။ မကောင်းဘူးပြောရင် ချိတ်ချိုးမှာ
ဒီပိတ်ရက် ၂ရက်လုံး အပြင်သွားရမှာ ဘယ်လိုမှ မ"ဒန်"နိုင်ပါဘူး။ မီးဖိုချောင်ထဲက ဒန်အိုးလေးဘဲ အပေါက်ဖောက်ပေးလိုက်မယ်။
လာလည်သူများကိုတော့ wikiက "ဒန်ပေါက်"ယူကျွေးပါတယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 3:00 AM9comments